Ii-FAQs - iLenda yaMazwe ngaMazwe yokuThengisa Co, Ltd.
Ukuhamba ngebhayikhi yeentaba
Ukuhamba ngebhayisikile kwiSixeko
Ukuhamba ngebhayisikile enqwelweni
Ibhayisekile yokuhamba ngebhayisekile
Ukuhamba ngebhayikhi ngebhayisekile
Ibhayisekile ye-Bike-e ibhayisekile
Imoto encinci yeebhayisekile
Ngaba ungawahambisa amaxwebhu afanelekileyo?
Ewe, sinakho ukubonelela ngamaxwebhu amaninzi kubandakanya iZatifikethi zoHlalutyo / ukuNgqinelana; I-inshurensi; Imvelaphi, kunye namanye amaxwebhu okuthumela kwelinye ilizwe apho kufuneka khona.
Kwiisampulu, ixesha elikhokelayo limalunga neentsuku ezisi-7. Kwimveliso yobuninzi, ixesha elikhokelayo ziintsuku ezingama-20-30 emva kokufumana intlawulo yedipozithi. Amaxesha akhokelayo asebenza xa (1) siyifumene idiphozithi yakho, kwaye (2) sinemvume yakho yokugqibela yeemveliso zakho. Ukuba amaxesha ethu okuhola awasebenzi kunye nomhla wakho wokugqibela, nceda ugqithise iimfuno zakho ngentengiso yakho. Kuzo zonke iimeko siya kuzama ukulungiselela iimfuno zakho. Kwiimeko ezininzi siyakwazi ukwenza njalo.
Unokwenza intlawulo kwi-akhawunti yethu yebhanki, kwi-Western Union okanye kwi-PayPal:
Iipesenti ezingama-30 yedipozithi kwangaphambili, ama-70% okushiyeka ngokuthelekiswa nekopi ye-B / L.
Iwaranti yezixhobo zethu kunye nokwenza umsebenzi. Ukuzinikela kwethu kukoneliseka kwakho ziimveliso zethu. Kwwaranti okanye akunjalo, yinkcubeko yenkampani yethu ukujongana nokusombulula yonke imiba yabathengi ukoneliseka komntu wonke
Ngaba uyaqinisekisa ukuhanjiswa okukhuselekileyo nokukhuselekileyo kweemveliso?
Iindleko zokuhambisa zixhomekeke kwindlela oyikhethayo yokufumana iimpahla. Ukuthetha ngesiqhelo yeyona ndlela ikhawulezayo kodwa kunye neyona ndlela ibiza kakhulu. Ngokujonga elwandle sesona sisombululo silungileyo samaxabiso amakhulu. Amanqanaba eempahla ngqo esinokukunika kuphela ukuba siyazazi iinkcukacha zenani, ubunzima kunye nendlela. Nceda unxibelelane nathi ngolwazi oluthe kratya.
IIBHICO ZONYULO ZOKUHLAZIYA NGOKUKHANYA. NDINGAYE NDIBHENZE ...
YIBA NESIMVA SESIQINISEKILEYO SOKUSEBENZA
Indawo ye-Tianjin yezoqoqosho kwisikhululo senqwelomoya
Sitsalele umnxeba ngoku: +8615222010177